Howlo badan ayaa looga baahan yahay xaafadaha faqooqan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Howlo badan ayaa looga baahan yahay xaafadaha faqooqan
La daabacay onsdag 26 april 2017 kl 12.30
Soomaalidu way ku daashay kullammada aan natiijada laheyn
Madaxa ciidanka ammaanka Sweden Dan Eliasson. sawir: Pontus Lundahl/TT
Madaxa ciidanka ammaanka ayaa soo jeediyay in loo baahan yahay in lagu tallaabsado howlo ka ballaaran sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka is-xabadeeynta iyo dembiyada ee ka dhaca xaafadaha duleedyada dhaca ee dalka.
Ciidanka ammaanka ayaa ku keliyeeystay xaafadaha ey dhibaatooyinku ka taagan yihiin, sida uu sheegay Dan Eliasson.
– Xaggeey ka baxeen hayadaihii kale ee dawligu? Iigama muuqdaan xaafadaha duleedyada dhaca ee bulshada ka faqooqan howlo sidaa u ballaaran oo ey ka hayaan. Ciidanka ammaanku waa hayadda keliya ee saraakiisheedu ka muuqadaan, kana howl-geleyaan goobahaa.
– Xaggeey ka baxeen waaxihii maamullada degmooyinku, aawaye barnaamijyadii shaqa-gelinta ee ku wajahnaa dadyoowga ku dhaqan xaafadaha faqooqan? Waa su’aallo uu is weeydiinayo Dan Eliasson, madaxa ciidanka ammaanka Sweden.
Xaafad ka mid ah xaafadaha uu carrabaabay madaxa ciidanka ammaanka Dan Eliasson ayuu ku dhaqan yahay wiilka lagu magacaabo Cali Yaasiin Gurbe oo ka mid ah dhallin-yarada firfircoon ee ku dhaqqan magaalada Göteborg.
Isagoona sheegay mar aannu khadka telefoonka kula xiriirnay in soomaalidu ka daashay kullammada howl-wadeennada iyo saraakiisha ammaanka ee xaafaduhu iyo in loo baahan yahay mashruucyo lagu howl-gelineyo dadyoowga ku dhaqan xaafadahaa.
Dan Eliasson ayuu warkiisu cad yahay kolka uu ka hadlayo dhibaatooyinka ka aloo-san xaafadahaa.
Horay ayay war-bixin farta ugu fiiqday 15 xaafadood gaar ahaan magaalooyinka Stockholm, Göteborg iyo Malmö inay faqooqnaan ku sugan yihiin. Xaafado ey ka dhacaan dunuub, faqooqnaan iyo aamin-darro hooseeysa ee loo hayo hayadaha cadaaladda.
– Waxaan jeclaan lahaa inaan arko marshuucyo laga hir-gelineyo. Waa tallaabooyin bulshadu u baahan tahay kolka laga hadleyo howlaha tacliinta, dar-yeelka, guryaha iyo caafimaadka si loo baabiy’yo dareenka faqooqnaanta. Howlahaasi maahan howlihii ciidanka ammaanka. Annaga waxaa noo yaala howlo, hase yeeshee waxaa loo baahan yahay in bulshadu gacan ka geeysato sidii wax looga qaban lahaa hor-u-marka xaafadahaa, sida uu sheegay Dan Eliasson.
Magaalada Göteborg oo ey ku yaalaan lix xaafadood oo ka mid ah 15-ka xaafadood ee faqooqan ayay ciidanka ammaanku uga howl-geleyeen labadii sannadood ee ugu dambeeyey nidaam ey kala kaashaneyaan hayadda ka hor-tagga dembiyada ee magaceeda loo soo gaabiyo BRÅ. Hoswlahaasina oo ka kooban wejiyo kala duwan.
Iminka ayaa lagu jiraa wjigii ugu horreeyay iyo sidii waddooyinka looga safeeyn lahaa dembiyada muuqda iyo iibinta muqaadaraadka.
Iyada oo kolka falalkaa suuqyada laga nadiifiyo loo baahan yahay sidii ay bulshada nawaaxigaa ku dhaqani u soo bannaan-bixi lahayd isla-markaana qayb uga qaadan lahayd howlaha, sida uu sheegay Dan Eliasson.
– Xaqiiqdii waa iney dadyoow badani soo bannaan baxaan. Ma ahan ereyada aan oran doono kuwo farxad geliyo maamullada, hase yeeshee waxaa wax badan laga hadlaa xaafadaha faqooqan iyo gacanta laga geeysaneyo, balse ma ahan tallaabooyin ii muuqda ee wax looga qabaneyo, sida uu sheegay Dan Eliasson, ahna madaxa hayadda ciidanka ammaanka.